सिक्का मिक्सर - Blockchain समाचार
जनवरी 19, 2018 व्यवस्थापक
कसरी Cryptocurrency Mixers र बेनामी जेब कार्य
Bitcoin को विरोधाभास यसलाई सार्वजनिक र अज्ञात दुवै छ भन्ने छ. नेटवर्क सबै लेनदेन सजिलै traceable छन्, तर सार्वजनिक कुञ्जी आफ्नो मालिक गरिएका छैनन्’ डाटा. एक प्रयोगकर्ता बाहिर cashes गर्दा जो मा Bitcoin पहिचान गर्न गोपनीयता देखि स्विच सक्छ विन्दु हो, वालेट वा विनिमय प्रयोग गरेर. छन्, तथापि, एक blockchain मा गुमनाम रक्षा गर्न धेरै तरिकाहरू.
एक cryptocurrency मिक्सर cryptocurrencies को गुमनाम सुधार को लागि एक उपकरण छ. यस तर्कको बरु सरल-एक प्रयोगकर्ता एक मिक्सर ठेगाना व्यक्तिगत प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि दर्ता गरिएको छ जो आफ्नो cryptocurrency पठाउँछ. को सिक्का त्यसपछि अन्य मानिसहरूको लेनदेन संग मिश्रित वा वितरण गर्दै एक मिक्सर हौं भनेर पर्स हजारौं बीचमा. एक पटक प्रक्रिया पूरा भएको छ, “सफा” bitcoins भण्डारण-या त फिर्ता प्रेषकलाई वा नयाँ मालिक पूर्व-सेट हस्तान्तरण गर्दै.
यो डट आयोजित एक Bitcoin वालेट छ $10,000 जो स्वामित्व ह्याकरहरूलाई अघि फिरौतीको भुक्तानी मा खाता पर्स toother धन पठाउने थाले. मुद्रा खाता throughbitcoin सार्दा थाले रूपमा, यसलाई चाँडै अत्यधिक सक्रिय वालेट मारा, र यस्तो जेब परे स्थानान्तरण गर्ने ह्याकरहरूलाई वास्तवमा गर्न बाँध मुश्किल, त्यस बिन्दु विगतका लेनदेन को ह्याकरहरूलाई पैसा समावेश जो निर्धारण’ वालेट असम्भव हुन सक्छ, र भन्ने विचार छ. हामी बस यहाँ 2,373transactions म्याप, तर Bitcoin मिश्रण प्रक्रियाहरू हजारौं मार्फत जान सक्नुहुन्छ.
धेरै पर्स बीच धन को वितरण यसलाई असम्भव एक प्रेषकको र एक रिसीभर बीच लिंक स्थापना बनाउँछ. प्रयोगकर्ताले पनि वास्तविक रकम लुकाउन गर्न संप्रदाय मा कारोबार इनपुट विच्छेद गर्न.
को mixers’ मालिकहरूले आफ्नो सेवाहरूको लागि 0.5-3% कारोबार शुल्क. यो याद गर्न अत्यावश्यक छ, तथापि, यदि तपाईं अर्को व्यक्तिको वालेट गर्न सिक्का पठाउन, तपाईं कहिल्यै तिनीहरूलाई फिर्ता प्राप्त हुन सक्छ.
एक मिक्सर प्रयोग विनिमय मंच प्रयोग गरेर त फरक छैन. तपाईं जो तपाईं मिश्रित bitcoins पठाउन चाहनुहुन्छ गर्न ठेगाना प्रविष्ट गर्न आवश्यक, आयोग शुल्क सेट (यो भारी लेनदेन गति असर), र प्रेस “जारी।” अर्को, तपाईं मिक्सर ठेगाना संग पृष्ठमा निर्देशित गरिनेछ तपाईं पहिलो स्थानमा आफ्नो bitcoins पठाउन आवश्यक जो.
त्यस ठेगाना लागि मान्य छ 24 घण्टा. पछि समय छ, लेनदेन अब प्रक्रिया गर्न सक्षम हुनेछ. यो अवस्था कम्पनी यसको ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ ग्यारेन्टी एक पत्रमा यसो छ.
त्यसैले, हामी Bitcoin पठाउन र लेनदेन मार्फत जाने प्रतीक्षा. सेवा को टोली तत्काल लेनदेन प्रतिज्ञा. बित्तिकै लेनदेन सेवा द्वारा पुष्टि रूपमा, यसको गति Bitcoin नेटवर्क मा लोड मात्र निर्भर हुनेछ.
Cryptocurrencies Monero, Zcash, र ड्यास
मूलतः, थिए दुई अज्ञात cryptocurrencies-Monero र Zcash. जन McAfee र एडवर्ड Snowden ती भविष्यमा को cryptocurrencies छन् भने. को सिक्का प्रयोगकर्ताहरूले blockchain सबै निशान लुकाउन र लेनदेनको संभावना अवलोकन भइरहेको निकाल्न अनुमति. Zcash एक क्रिप्टोग्राफिक उपकरण भनिन्छ ZK-SNARK प्रयोग गरेर यो हासिल गरेको छ (शून्य-ज्ञान प्रमाणहरू), र Monero को घन्टी हस्ताक्षर प्रविधि लागू गरेको छ (यो संग हस्ताक्षर सन्देश मान्छे को एक विशेष समूह मा कसैले समर्थन छ, तर यो निर्धारण गर्न computationally infeasible छ समूह सदस्यहरूको जो’ कुञ्जीहरू हस्ताक्षर उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको थियो). Zcash र Monero लेनदेन मा जानकारी गुमनाम सुनिश्चित, वालेट शेष, र सिक्का को आन्दोलन.
यो untraceable लेनदेन आउँदा Cryptocurrency ड्यास पनि सुरक्षित छ. को PrivateSend प्रविधि प्रयोगकर्ता मिश्रण र लेनदेन तोड्न सक्षम मानक संप्रदाय मा तल इनपुटहरू. वालेट त्यसपछि अनुरोधहरू पठाउँछ “masternodes” जो मिश्रण लागि जिम्मेवार छन्.
सिक्का Mixers लागि वैकल्पिक के हुन सक्छ? विशेष विचार पर्स गुमनाम को एक उच्च डिग्री संग, उदाहरण, Electrum. त्यहाँ एक निर्मित विकल्प मिश्रण Bitcoin छ भनेर पर्स पनि छन्.
मा 2014, कोडी विल्सन, एक गुप्त उत्साही पनि 3D-मुद्रित बन्दूक सिर्जना गरेको छ जसले, अमिर Taaki साथ, डार्क वालेट परियोजना-ब्राउजर प्लगइन र एक Ubuntu ग्राहक शुरू.
गाढा वालेट ऊपर CoinJoin निर्माण गरिएको छ, जो implies सबै लेनदेन मिश्रित हो र यो एक cryptocurrency स्वामित्व पहिलो थियो पत्ता लगाउन असम्भव छ. वालेट को थप प्रयोगकर्ताहरू, को को गुमनाम राम्रो.
एक बेनामी नेटवर्क मा जेब
को Darknetmarkets वेबसाइटमा, को Tor नेटवर्क मार्फत भुक्तानी पठाउन एक संरक्षण गोपनीयता एउटा पुस्तिका पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि, एक प्रयोगकर्ता दुवै अज्ञात र खुला नेटवर्क मा धेरै पर्स आवश्यक, को Tor ब्राउजर, र मिश्रण सेवाहरू Tor समर्थन.
सिक्का मिक्सर सेवा मिश्रण
विषय वालेट बारेमा थप
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 19 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:अमेरिकी गुप्तचर एक परियोजना Bitcoin छ ?